Munaasabad Lagu Xirayey Dugsiga Sheekh Xaamud Garoowe oo Ka dhacday Dugsiga – Radio Daljir
Munaasabad Lagu Xirayey Dugsiga Sheekh Xaamud Garoowe oo Ka dhacday Dugsiga
Maajo 5, 2015 2:39 b 0
Talaad, May 05, 2015 (Daljir) — Dugsig hoose dhexe ee Shiikh Xaamud ee magaalada Garoowe ayaa waxaa kadhacday munaasabad ballaaran oo lagu soo xirayey sanad dugsiyeedka 2014-2015, sidoo kalena lagu bixinayey abaalmarino kala duwan lagu gudoonsiinayey shaqsiyaad iyo fasalo kala duwan.
Munaasanadaan ayaa waxaa ka qaybgalay maamulaha dugsiga Iimaamu Nawaawi Garoowe, waalidiinta dugsiga Sheekh Xaamud, maamulka iyo macalimiinta dugsiga, ardayda wax kabarata dugsigaasi iyo martisharaf kale oo lagu casuumay.
Cabdiraxmaan Warsame Maamulaha dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Xaamud oo furay munaasabadda ayaa sheegay in ujeedka ugu muhiimsan ee loodhigay munaasabadaani ay tahay sidii ardayda loogu dhiiri gelin lahaa waxbarashada dugsigana ugu soo laaban lahaayeen.
Qaar kamid ah waalidiintii ka qaybgalay kulanka ayaa bogaadiyey munsaasabadaan waxaana ay ardayda ku booriyeen inay dalkooda wax ka bartaan waxna u bartaan intii ay aadi lahaayeen dalal shisheeye oo aysan dhaxal ulahayn.
Ugu dambayntiina waxaa munaasabadda soo xiray maamulaha dugsiga hooose, dhexe iyo sare ee Iimaamu Nawaawi Cabdidaahir Abshir waxaana uu ka codsaday waalidiinta inay ardayda gacanta kuhayaan mudada lagu jiro fasaxa maadaama ay ardaydu mashquulin u baahan yihiin.
Munaasabadaan ayaa kusoo dhamaatay jawi wanaagsan, waxaana shahaado sharafyo, billado iyo abaalmarino kala duwan lagu gudoonsiiyey shaqsiyaad iyo fasalo muujiyey dedaal iyo waxqabad wanaagsan intii lagu jirey sanad dugsiyeedkaan.
Tahriibayaal Afrikaan ah oo soo gaaray Talyaaniga
Madaxweyne Gaas iyo safiirka Jarmalka ee Soomaaliya oo Nairobi ku shiray